DeepMind AI nwere ike ịkọ amụma ihu igwe ka mma | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 06/10/2021 14:03 | Amụma
Meteorology dị ka sayensị na -aga n'ihu n'ihi mmepe nke teknụzụ. Ugbu a, enwere ọtụtụ mmemme kọmpụta nwere ike ịkọ amụma mgbe na ebe ọ ga -ezo. Ụlọ ọrụ nke DeepMind ewepụtala ọgụgụ isi nke nwere ike ịkọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpọmkwem oge na ebe ọ ga -ezo. Ụlọ ọrụ a esorola ndị na-ahụ maka ihu igwe na UK arụ ọrụ imepụta ihe nlereanya ka mma maka ịkọ amụma dị mkpirikpi karịa sistemụ dị ugbu a.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara akpa Robleda, teknụzụ amụma ihu igwe nke ụlọ ọrụ DeepMind.
1 Amụma ihu igwe
2 Mmepe DeepMind
3 Nnwale DeepMind AI
4 Ọganihu na ịkọ amụma ihu igwe
Amụma ihu igwe
DeepMind, ụlọ ọrụ ọgụgụ isi wuru ewu nke dị na London, na -aga n'ihu n'ọrụ ya nke itinye mmụta miri emi na nsogbu sayensị siri ike. DeepMind ewepụtala ngwa mmụta miri emi akpọrọ DGMR na imekọ ihe ọnụ na British National Weather Service's Met Office, nke nwere ike ibu amụma nke ọma gbasara mmiri ozuzo n'ime nkeji 90 na -abịa. Ọ bụ otu n'ime ihe ịma aka kacha sie ike na ịkọ amụma ihu igwe.
N'iji ya tụnyere ngwa ndị dị, ọtụtụ ndị ọkachamara kwenyere na amụma DGMR kacha mma n'ọtụtụ ihe, gụnyere amụma ya maka ọnọdụ, oke, mmegharị na oke mmiri ozuzo, 89% nke oge. Ngwa ọhụrụ DeepMind mepere igodo ọhụrụ na bayoloji nke ndị sayensị na -agba mbọ idozi kemgbe ọtụtụ iri afọ.
Agbanyeghị, ọbụlagodi obere ndozi na amụma dị mkpa. Amụma mmiri ozuzo, ọkachasị oke mmiri ozuzo, dị oke mkpa maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, site na ihe omume n'èzí ruo ọrụ ụgbọ elu na ihe mberede. Mana imezi ya siri ike. Ịchọpụta oke mmiri dị na mbara igwe na oge na ebe ọ ga -ada dabere na ọtụtụ usoro ihu igwe, dị ka mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ, nhazi igwe ojii, na ikuku. Ihe ndị a niile dị mgbagwoju anya nke ọma n'onwe ha, mana ha na -adịkarị mgbagwoju anya mgbe ejikọtara ha.
Teknụzụ amụma kacha dị mma na -eji ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ịme anwansị nke physics ikuku. Ndị a dabara maka amụma ogologo oge, mana ha amachaghị nke ọma ịkọ ihe ga-eme n'oge awa na-abịa. A na -akpọ nke a amụma amụma ozugbo.
Emebela usoro mmụta mmụta miri emi gara aga, mana usoro ndị a na -arụ ọrụ nke ọma n'otu akụkụ, dị ka ịkọ amụma ọnọdụ, na -efufu nke ọzọ, dị ka ịkọ amụma. Data radar maka oke mmiri ozuzo nke na -enyere aka ịkọ amụma mmiri ozuzo ozugbo ka bụ nnukwu ihe ịma aka nye ndị ọkà mmụta ihu igwe.
Ndị otu DeepMind jiri data radar zụọ AI ha. Ọtụtụ mba na mpaghara na -ebipụta foto radar nke na -eso nhazi igwe ojii na mmegharị ya ụbọchị niile. Dịka ọmụmaatụ, na UK, a na -ebipụta ọgụgụ ọhụrụ kwa nkeji ise. Site na ijikọ foto ndị a ọnụ, ị nwere ike nweta vidiyo nkwụsịtụ ọhụrụ na-egosi ka usoro mmiri ozuzo nke obodo si agbanwe.
Ndị ọrụ nyocha ahụ na -eziga data a na netwọkụ miri emi yiri GAN, nke bụ AI a zụrụ azụ nke nwere ike iwepụta nlele data ọhụrụ nke yiri nnọọ data ejiri na ọzụzụ. Ejirila GAN mepụta ihu adịgboroja, gụnyere Rembrandt adịgboroja. N'okwu a, DGMR (nke na -anọchite anya '' Generative Deep Rain Model '') amụtala imepụta nseta ihuenyo radar ụgha nke na -aga n'ihu n'usoro nha n'ezie.
Nnwale DeepMind AI
Shakir Mohamed, onye duziri nyocha na DeepMind, kwuru na nke a bụ otu ihe ahụ ikiri ihe nkiri ole na ole na fim na ịkọ ihe ga -eme ọzọ. Iji nwalee usoro a, ndị otu ahụ jụrụ ndị ọkà mmụta ihu igwe iri ise na isii sitere na Bureau of Meteorology (ndị na -etinyeghị aka na ọrụ ahụ) ka ha banye n'ime anwansị anụ ahụ dị elu na otu ndị mmegide.
89% nke ndị mmadụ kwuru na ha na -ahọrọ nsonaazụ DGMR nyere. Algọridim mmụta igwe na -agba mbọ ka ebuli elu maka ntakịrị ntakịrị etu amụma gị siri dị mma. Agbanyeghị, amụma ihu igwe nwere ọtụtụ akụkụ dị iche iche. Ma eleghị anya, amụma nwere oke mmiri ozuzo na -ezighi ezi n'ebe kwesịrị ekwesị, ma ọ bụ amụma ndị ọzọ nwetara nchikota nke ike siri ike mana ebe adịghị mma, wdg.
DeepMind kwuru na ọ ga -ewepụta usoro nke protein niile sayensị maara. Companylọ ọrụ ahụ ejirila protein AlphaFold na -apịpụta ọgụgụ isi mmadụ imepụta ihe maka nchekwa mmadụ, yana maka yist, ijiji mkpụrụ na ụmụ oke.
Mmekọrịta dị n'etiti DeepMind na Met Office bụ ezigbo ihe atụ nke ịrụ ọrụ na ndị ọrụ njedebe iji mezue mmepe AI. O doro anya na nke a bụ ezigbo echiche, mana ọ naghị emekarị. Ndị otu ahụ rụrụ ọrụ a ruo ọtụtụ afọ, ndị ọkachamara sitere na Bureaulọ Ọrụ Meteorology wee rụọ ọrụ ahụ. Suman Ravuri, onye nyocha sayensị na DeepMind, kwuru, sị: "Ọ na -akwalite mmepe nke ihe nlereanya anyị n'ụzọ dị iche karịa mmejuputa nke anyị." "Ma ọ bụghị ya, anyị nwere ike mepụta ụdị nke na -agaghị aba uru na njedebe."
DeepMind nwekwara mmasị igosi na AI ya nwere ngwa bara uru. Maka Shakir, DGMR na AlphaFold bụ akụkụ nke otu akụkọ: ụlọ ọrụ ahụ na -eji ahụmịhe afọ ha edozi mgbagwoju anya. Ikekwe nkwubi okwu kachasị mkpa ebe a bụ na DeepMind mechara malite depụta nsogbu sayensị dị adị n'ezie.
Ọganihu na ịkọ amụma ihu igwe
Ekwesịrị ịkwado amụma ihu igwe site na mmepe nke teknụzụ ka anyị na -abịarukwu nso na ịghọta nke ọma ka ikuku anyị si arụ ọrụ. Ọtụtụ oge mmadụ na ngụkọta oge ya nwere ike ịdaba na mmejọ nkịtị nke enwere ike izere ya na mmepe nke ọgụgụ isi.
Amụma ihu igwe bụ isi ihe maka ịbụ mmadụ ebe anyị nwere ike irite uru dị ukwuu mmiri na -arụ ọrụ nke ọma ma zere ọdachi ụfọdụ n'oké ifufe na oké mmiri ozuzo. Maka nke a, ndị ọkà mmụta ihu igwe na -ekwenyekarị n'ịzụlite ọrụ ọgụgụ isi maka ịkọ amụma mmiri ozuzo.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ọrụ DeepMind na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Amụma » DeepMind AI nwere ike ịkọ amụma ihu igwe ka mma
Ihu Igwe Nobel na 2021